Xog’hayaha guud ee booliska aduunka oo Muqdisho yimid – idalenews.com
Xog’hayaha guud ee booliska aduunka oo Muqdisho yimid
Wafdi uu hoggaaminayo xoghayaha guud ee hay’adda Booliska Aduunka Interpol ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ayagoo kulan la qaatay mas’uuliyiinta ciidanka booliska Soomaaliya.
wafdigan maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo uu hogaaminayay Xog’hayaha guud ee hay’adda booliska Aduunka ee Interpole Noble Ronald ayaa markii uu ka soo degay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa halkaasi ku soo dhaweyey taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Shariif Sheekhuna Maye, Taliye ku xigeenka Ciidanka booliiska AMISOM iyo sarakiil kale.
Markii uu ka soo dagay garoonka ayaa waxa uu kormeer ku tagay taliska ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, oo uu kulan kula qaatay taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, hay’adda dambi baarista CID, taliska Booliiska AMISOM ee Muqdisho iyo mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimah gudaha.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya S/Gaas Shariif Sheekhuna Maye ayaa warbixin ka siiyay hog’haya guud qaabka uu u howgala ciidamada Booliska Soomaaliya.
Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya iyo hog’hayaha guud ee booliska Aduunka, waxaana ugu horeyn la hadlay saxaafadda xog’hayah guud ee booliska Aduunka Interpol waxa uuna sheegay in booliska Soomaaliyeed ay ka taageeri doonaan wax waliba oo ay u baahan yihiin, waxa uuna intaasi ku daray in laga cafiyay lacag ka badan 300 oo milyan oo dolar taas oo lagu lahaa ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Sidoo kale taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa uga mahadceliyay booqashada uu magaalada Muqdisho ku yimid xog’hayaha guud waxa uuna tilmaamay in booliska aduunka uu gacan ka siiyay booliska Soomaaliya soo qabashada shaqsiyaad dambi kagalay wadanka kaas oo u baxsaday dalka dibadiisa.
Intaasi kadib xog’haya ayaa kulan la qaatay mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya waxa ugu dambeyntii hadiyado kala gudoomay xog’haya iyo taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya.
Muqdisho oo looga dhawaaqayo guddi qaabilsan isku celinta hantida dadweynaha
Xoghayaha guud ee QM oo ka xumaaday xukunka Wariyaha iyo gabadha la kufsaday